Home » Ideas & Plans » ပရဟိတစိတ်ဓာတ်
Posted by veryloveman on Feb 16, 2015 in Ideas & Plans | 27 comments
အလွန်ပဲ ကျက်သရေ မင်္ဂလာရှိလှတဲ့ စကားစုလေးပါ
ပရဟိတဆိုတဲ့ အသံကို ကြားရသူ့ရင်မှာ စိတ်နှလုံး အေးချမ်းလှပါဘိ။ အခုဆိုရင် အများအကျိုး ထမ်းရွက်သူ ပရဟိတသမား ကျွန်တော်တို့ လူငယ်များ လောကကြီးထဲမှာ များစွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ
“ဂုဏ်ယူပါတယ် ပရဟိတ မောင်နှမများ”
အများအကျိုးအတွက် ပရဟိတ အစစ်အမှန်ကို တာဝန်သိစိတ်နဲ့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်တာဟာ မိဘက သားသမီးကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်တာနဲ့ အလားသဏ္ဌန် တူတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်မိပါတော့တယ် ပြန်ရယူလိုစိတ် စိုးစဉ်းမျှမရှိ ပေးဆပ်ချင်ရုံ သက်သက်နဲ့ မျှော်လင့်ချက်မထား ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေကြတာကြောင့် အလွန်ပဲ မွန်မြတ်လှပါတယ် ဘုရားဟောနဲ့လဲ ကိုက်ညီတဲ့အတွက် လက်ရှိဘဝမှာရော သံသရာအတွက်ပါ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ်
အရာအားလုံးဟာ စိတ်ထားတတ်ရင် ပရဟိတဖြစ်သွားတယ်လို့ သာမာန် သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်မျိုး ဖြစ်ဖို့ကတော့ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်လုပ်ရတာ ခက်လှပါတယ် ဝါသနာကို အရင်းခံပြီး
ယခုလို လှူဒါန်းရတဲ့ အကျိုးအားကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာရော နောင်ဘဝအဆက်ဆက်တိုင်းမှာ ဘာဖြစ်ပါစေ ညာဖြစ်ပါစေလို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ ဆုမတောင်းခဲ့ပါဘူး လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ အဆင်မပြေသူများ အဆင်ပြေသွားဖို့သာ အဓိကထားပါတယ်
လုပ်အားနဲ့ဖြစ်စေ ငွေအားပဲဖြစ်စေ အများနဲ့စုပေါင်းပြီးဖြစ်စေ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲဖြစ်စေ ပျော်လို့ပဲလှူလှူ ပျင်းလို့ပဲလှူလှူ ဘယ်လိုပဲလှူလှူပါ အဓိကက စပြီးလှူလိုက်ဖို့သာ အဓိကကြပါတယ်
စတင်လိုက်ပါ စမိတဲ့ခြေလှမ်း ကမ်းလိုက်တဲ့ လက်တစ်အစုံတိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိနေမယ် ဆိုတာ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ထားလိုက်ပါ
ကျွန်တော်အမြဲ တွေးကြည့်နေမိတဲ့ ပရဟိတနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ တွေးတောချက်လေးကို အနည်းငယ်လောက် ပြောပြချင်ပါတယ် အဲဒါကတော့
ဖြူစင်ပြီး အပြစ်ကင်းစင်လှတဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲကနေ မျက်ရည်တွေ စီးကျနေတာ သင်တို့ ကြည့်ရက်သလား
အားကိုးတကြီး လှမ်းကြည့်နေကြတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ ချစ်စရာ့ မျက်နှာလေးကိုရော သင်တို့ လှစ်လျူရှုရက်သလား
ခွန်အားနဲ့မမျှ လူမမယ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေ ပင်ပန်းကြီးစွာ ဝမ်းစာအရေး ရှာဖွေနေကြတာကိုရော သင်တို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေတော့မှာလား
အရာရာဟာ ကံစီမံရာဆိုပေမဲ့ မျှတတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းထဲ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ နေထိုင်နေကြတာချင်း အတူတူ သင်တို့အနေနဲ့ သူတို့လေးတွေအတွက် မိမိတို့ ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးလို တန်းတူ မဟုတ်ရင်တောင် အနည်းငယ် အခွင့်အရေး တစ်ချို့တော့ ပေးသင့်ပါတယ် ဒါကျွန်တော့ရဲ့ ပရဟိတဆိုတဲ့ စကားစုအပေါ်ထားရှိထားတဲ့ စိတ်ထားပါ
လုပ်စေချင်ပါတယ် လုပ်နေရင်းနဲ့ သင်တို့တစ်ကယ် ကြည်နူးလာပါလိမ့်မယ်
ဘယ်အဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပရဟိတလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အားလုံးဟာ အလိုလို မွန်မြတ်ပြီးသားပါ
ချမ်းသာတဲ့သူတွေလဲ ချမ်းသာတဲ့အလျောက် အချိန်မပေးနိုင်သလို ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလဲ ဆင်းရဲတဲ့အလျှောက် ရုန်းကန်နေကြရတာ လောကသဘာဝပါ ဒါကို လျစ်လျူရှူလို့
အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ လူတွေသာ လောကကြီးထဲမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပရဟိတဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပဲ လူ့လောကထဲကနေ အလိုလို ပျောက်ကွယ်သွားရပါလိမ့်မယ်
လုပ်နိုင်သူတွေ လုပ်နေကြတာ အများကြီးပါ ကိုယ့်အတွက်ပြည့်စုံမှ ပရဟိတလုပ်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ် ကိုယ့်မိသားစုတောင် မပြည့်စုံပဲနဲ့ ပရဟိတ လုပ်နေကြတာ သဘာဝမကျပါဘူး ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတွေ အကြောင်းပြချက်တွေကို ခဝါချ ပရဟိတ အကျိုးဆောင်ကြဖို့ကို ကျွန်တော် အထူးပဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
အဲဒီလို မိမိ မိသားစု ပြည့်စုံမှ (ဝါ) အချိန်ပေးနိုင်မှသာ ပရဟိတ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော် မေးခွန်းလေး တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်ပါတယ် ခင်ဗျားတို့မိသားစုက ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံမှာလဲဗျာလို့
ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ ရုန်းကန်နေကြတဲ့ ဘယ်လူ့ဘဝမှာမှ ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကလဲ ရှိပြီးရင်းရှိချင်ကြတယ် မရှိတဲ့လူတွေကလဲ ရှိအောင်ကြိုးစားချင်ကြတယ် ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဘယ်အချိန် အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြမှာလဲလို့ ကျွန်တော် မေးကြည့်ချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ၃၈ဖြာမင်္ဂလာ တရားတော်မှာ
အဲဒါမှ ဗုဒ္ဓဝါဒ ကမ္ဘာ့မင်္ဂလာတွေ..။
လို့ မင်္ဂလာ့သုတ်တန်မှာ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်
အရာရာဟာ ကံတရားအတိုင်းပါပဲလို့ မှတ်ယူထားနိုင်ပေမဲ့လဲ ကံတရားကြောင့် ဒီဘဝ မပြည့်မစုံ ဖြစ်နေရတာက သူ့ကိစ္စပါ ကူညီစောင့်ရှောက်ရမှာက ကိုယ့်ကိစ္စပါ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လုပ်အား သို့မဟုတ် ငွေအားနဲ့ ကူညီပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး အဆင်ပြေသွားရတယ်ဆိုရင်ပဲ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ ပီတိဟာ သင်တို့တစ်သက်လုံး ခံစားနေရမှာပါ
အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာ မျှော်လင့်ချက်မထားပဲ ပေးဆပ်ရတဲ့အတွက် လက်ခံသူရော ပေးဆပ်သူမှာပါ အကျိုးရှိစေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ နေနေကြတဲ့ လူထဲကလူတွေပါ
ကိုယ့်မိသားတစ်စုထဲ အဆင်ပြေလို့ လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပြီလို့ မထင်ပါနဲ့ သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင်တို့ထက်နိမ့်ကျတဲ့ လူတွေ သင်တို့နားမှာ အလုပ်ကျွေးပြုနေကြလို့သာ သင်တို့မိသားစု အဆင်ပြေနေတာပါ ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် တစ်ယောက်ထဲလုပ်လို့ မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး
ဒါကြောင့် လောကကြီးထဲမှာ အဆင့်အတန်းမျိုးစုံဟာ မရှိမဖြစ်ပါ
လူတိုင်းသာ သင်တို့ထင်သလို ကံစီမံရာအတိုင်းပါ ကူညီဖို့ မလိုပါဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားရင် ကျွန်တော်တို့လို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးဒေါ်နွား ကျောင်းနေတဲ့ လူတွေဆိုတာလဲ ပေါ်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး မပြည့်စုံတဲ့လူတန်းစား မမျှတတဲ့ လူနေမှူ အဆင့်အတန်းတွေအောက်မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ လူသားတွေအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး တူအောင်ညှိပေးဖိုရာ လူသားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ဒါဟာ ဘယ်သူ့မှ တာဝန်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတာဆိုတော့ အရမ်းမွန်မြတ်လှပါတယ်
လူဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြချင်ရင် ပရဟိတလုပ်ပါလို့
ကျွန်တော် သိသမျှ တတ်သမျှ ကြားသမျှနဲ့တကွ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ မှန်သမျှထံမှ မှတ်သားစရာ စကားရပ်များကို မျှဝေကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှစ်လျူရှူမထားပဲ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ရင်း ဘဝနိဂုံးကို အကောင်းဆုံး ဂုဏ်ပုဒ်များနဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း……..
လို့အဆိုရှိပါတယ်..။ တကမ္ဘာလုံးလိုက်နာကြရတဲ့.. ပရဟိတအလှူရဲ့ ဥပဒေသပါပဲ..။
လှူချင်လှူလို့ရပါ သူကြီးမင်းခင်ဗျာ http://www.ofomyanmar.org.
အရမ်းချစ်တတ်သူတစ်ယောက်ကို အရမ်း ချင်ခင်မိပါကြောင်းးးး
ဘာကြောင့် ချစ်ခင်မိလည်းဆိုတော့ ရေးတဲ့စာထဲကနေ စိတ်ကို လှမ်းမြင်မိလို့
နွေးထွေးစွာ. . .
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါအလင်းဆက်ခင်ဗျာ ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာ မိဘမဲ့လေးတွေကိုပါ တစ်ချို့ကောင်မလေးတွေ တစ်မျိုးမြင်မှာစိုးလို့
လူကိုရော ပရဟိတ စိတ်ဓာတ်ကိုရောပါ။
.မွန်မြတ်လှတဲ့ ပရဟိတစိတ်ထားရှင် အရမ်းချစ်တတ်သူကို
ရွာကလေးနဲ့ ဆက်သွယ်ထားချင်ပါတယ်မအိလေးခင်ဗျာ ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းတော့ လူသစ်လေးမို့ မသိသေးပါ http://www.ofomyanmar.org 09250320662
. မြန်မာ့ဂဇက် ကိုရွာကလေးလို့ တင်စားထားတာပါ…
.စာရေး စာဖတ်သူတွေစုပြီး လိုအပ်သည့်နေရာများကို လှူ ဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်…
.(မကြာသေးခင်ကဘဲ သဘာဝ တရားရိပ်သာကို သိန်းရှစ်ဆယ်ကျော်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ စာဟောင်းလေးတွေ အချိန်ရရင် ဖတ်ကြည့်ပါနော်)
.. Gazette ရွာသူားတွေဆုံကြပါပြီ
.အဲ့ဒီမှန်ကန်တော်တည့် တဲ့ပရဟိတစိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်ဗျို့
.ဒီပို့စ်ကို မထောက်ခံပါဘူး။ (၀င်ဝင်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းသလို ဖြစ်ရင် ဆောတီးပါ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေ)
.ပရဟိတဟာ မွန်မြတ်တယ် မှန်ပေမယ့် လူ့ဘောင်မှာ ဦးတည်ရမယ့် ပန်းတိုင်အစစ်အမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ ပန်းတိုင်အစစ်အမှန်ဟာ ပရဟိတ လုပ်စရာမလိုတဲ့ လူ့ဘောင် လူ့အသိုက်အ၀န်းပါ။ သူတောင်းစားတောင် အလကားတောင်းစားလို့ မရတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပါ။
.သဂျီးရဲ့ စာသား Charity begins at home, and justice begins next door.
– Charles Dickens ကို ပေါ့ပေါ့လေး ဆွဲယူတွေးလို့ မရဘူး။ သူဆိုလိုတာက ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အိမ်ထဲမှာ အစပျိုးပါ ဆိုတဲ့ စကားမျိုး မဟုတ်ဘူး။ တိုက်ရိုက်ယူရမယ့် စကား မဟုတ်ဘူး။ ချားလ်စ်ဒစ်ကင်ရဲ့ စကားကို ဘယ်လိုများ ရှင်းပြရပါ့မလဲ။ အလှူ ဒါန ဆိုတာ တရားမျှတမှုအောက်မှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ မင်းလှူချင်တမ်းချင်ရင် ကိုယ့်အိမ်ထဲ ကိုယ်လုပ်၊ တရားမျှတမှုကတော့ ပထမ ဦးစားပေးလို့ ဆိုလိုတာပါချင့်။
.ဥပမာ တစ်ခုပြောပါရစေ။ ပို့စ်ထဲမှာ ပါတာက လူဆိုတာ ကံစီမံရာအတိုင်း ဘ၀အထွေထွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပရဟိတ လုပ်သင့်တယ်ပေါ့။ တကယ်က လူသားတိုင်း လူ့အခွင့်အရေးကိုသာ လိုအပ်တာပါ။ လူသားတွေ ခွင့်တူညီမျှ ရကြဖို့သာ အဓိက။ ကံပေးတဲ့ဘ၀ထက် ခွင့်တူညီမျှ မရကြလို့ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟသွားတဲ့ နစ်နာသွားတဲ့ ဘ၀တွေအတွက် ပရဟိတ ဆိုတာ သူတော်ကောင်းရူး ရူးချင်သူတွေနဲ့ တကယ်သနားတတ်သူတို့အတွက် စိတ်ဖြေရာ တစ်ခုပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ခြေထောက်သွင်သွင် ကျိုးအောင် ရိုက်ချိုးပြီးမှ တုတ်ကောက်ပေးပြီး ပရဟိတ ခေါင်းစဉ် တပ်လို့ မရဘူး။ ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတာ ဒါပဲ။ ပရဟိတဟာ နိုင်ငံရေးရဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ရှိရမယ်။ ပရဟိတကို မီနီ နိုင်ငံရေးလို့ ပြောတာ မထောက်ခံနိုင်ပါဘူး။
. ပြီးတော့ လှူတဲ့သူနေရာက စဉ်းစားရင် ပရဟိတ လုပ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပေါ့။ အလှူ အတမ်းခံရတဲ့ လူအဖို့ကရော။ မလွှဲသာလို့ လက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တဆင့်နိမ့်သွားသလို စိတ်ထဲမခံစားလိုက်ရဘူးလား။ ဒါကြောင့် လှူတဲ့အခါ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လှူတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ မန်းဂဇက်က အလှူမျိုး။ ဒါပေမယ့် ပရဟိတ ကို သိပ်မွန်မြတ်တယ်လို့ ယူဆထားပုံကိုတော့ သဘောမကျနိုင်ပါ။ တရားမျှတမှုသာ အခရာ။ လူသားချင်း ခွင့်တူညီမျှ ဖြစ်လာဖို့ ကသာ အဓိက လို့ ယူဆမိပါတယ်။
အဲဒါကို ..ယူအက်စ်က.. ချယ်ရတီတွေမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်…။
လှူချင်တန်းချင်ရင်.. ကိုယ့်အိမ်ကစ… .။ ကိုယ့်မိဘ..ညီအကိုတွေဆီကစ…။ လိုတာကူ.. ပြီးမှ.. အိမ်ပြင်ထွက်သဘောပါခင်ဗျ..။
ပြောထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ က တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက်ကွဲနေတာ မို့
ဘယ်က အမှန် ဘာကအမှား မသိ။
ကွ ကိုယ် ကြိုက်တာ ယူတွေးလို့ ရတယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ က ပြောတာကတော့ အဲဒါ ဘိုင်ဘယ်လ် ထဲက လာတာ လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
ခပ်နောက်နောက် လူ တစ်ယောက်က ဘာပြောလဲ ဆိုတော့
ဘုရား က သူ့ကိုဘဲ လှူရအောင်လို့ ပြောတာတဲ့။
အဲလို မှန်းခြေ ပြောတာတွေထဲ သဘော အတွေ့ဆုံးက
Home ဆိုတာ ကိုယ်ပေါ့။ ကိုယ့်စိတ်/ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ ကောင်းအောင် မလုပ်ဘဲ သူများကို ကောင်းအောင် သွားလုပ်ပေးလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောတဲ့။
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် က စ သလိုပေါ့။
justice begins next door ကတော့
ကိုယ့် အိမ်နီးချင်း ကို အမြဲ မျှမျှတတ နေပါ လို့ လဲ တွေးလို့ ရသတဲ့။
ငါ့အိမ်ထဲ ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်။ တရားမျှတမှု က တစ်ခြား အိမ်မှာ သွားစ လုပ် လို့ ဆိုတာလဲ ရသတဲ့။
သူများ တွေ ငြင်းနေတာ ကို ပြောပြတာ။ lol:-)))
ကိုယ့် အိမ် က ကလေး တွေ ကို အငတ်ထားပြီး တစ်ခြား ပံ့ပိုး နေတာလဲ မကောင်း။
ကိုယ့်အိမ်မှာ စားမကုန် လျှံနေပြီး ကိုယ့်ဟာကို သာ အတင်းသွပ် တစ်ခြား က ငတ်နေ သူများ ကို မမျှ တာလဲ မကောင်း။
အလယ်အလတ် လေးမှာ နေကြတာပေါ့။ :))
ဒါနအစ ကိုယ့်အိမ်က တဲ့….
လူအများအတွက် ပရဟိတလုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်မိသားစု ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နေ့စဉ်ဘဝထဲက ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းက လူတွေအပေါ် ချစ်ခင်ခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ ကောင်းတဲ့ဖက်ကနေ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း၊ လေးစားခြင်းကနေစတင်ပါသတဲ့…။
ကိုယ့်မိသားစု၊ ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ် မချစ်ခင်၊ မလေးစားဘဲနဲ့တော့ တခြားသူစိမ်းအပေါ် ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာစေတနာထားပြီး ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ ကူညီနိုင်မလဲနော်…
“Charity begins at home” .. အရမ်းလှတဲ့စကားလုံးလေး.. ဒီကနေ့ဖတ်လိုက်မိတာပါ ..
မှန်တဲ့ဟာတွေလဲ မှန်ပါတယ် အမတော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘုရားဟောထားတဲ့ ပရနဲ့ဟိတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး သိပါလိမ့်မယ် တခြားဘာသာဝင်တွေလဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လက်တွဲညီညီ လုပ်ဆောင်နေတာ သက်သေ အထောက်ထားတွေရှိပါတယ် နောက်တစ်ချက်က ပရဟိတကို နိုင်ငံရေးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး ပရဟိတဆိုတာဖြူစင်တယ်ဗျ ဆင်းရဲချမ်းသာမရှိဘူး အသားအရောင်ခွဲခြားတာမရှိဘူး ဘာသာခွဲခြားတာမရှိဘူး ကိုယ့်မှာတစ်ကျပ်ရှိရင် ဆယ်ပြားလှူတာ အပြစ်လားဗျာ ဆယ်ပြားနဲ့မလောက်လို့ အားမရလို့ စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေတွေစုပြီး အလှူလုပ်ကြတာ အပြစ်လားဗျာ ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကို ရိုက်ချိုးဖို့နေနေ ခွေးတစ်ကောင်ကိုတောင် ခဲလုံးနဲ့မထုခဲ့ဖူးပါဘူး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ထက်နိမ့်ကျသူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီတာ အပြစ်ဖြစ်နေပြီလားအမတော်
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း NGO, INGO, WHO, ICRC တို့ စတာတွေက သူတော်ကောင်းရူး ရူးချင်သူတွေလားဗျာ ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတလုပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့အထောက်အပံ့မှ မပါပဲ ကိုယ့်စရိတ် ကိုယ်စိုက်ပြီး လုပ်ကြတာပါ ကျွန်တော်တို့က လခမစားထားတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စစ်စစ်တွေပါအမတော် အမတော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် မိတ်ဆွေတွေထဲက ပရဟိတလုပ်နေကြသူတွေထဲမှာ သူတော်ကောင်းရူး ရူးချင်သူတွေနဲ့သာ အမတော် တွေ့ခဲ့ဘူးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဝါးလုံးကို ဟိုဟာသုတ်ပြီးတော့ မရမ်းစေချင်ပါဘူးအမတော် သုတ်ထားတဲ့အခြမ်းဘက်က ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ဘက် ဖြစ်နေမှာတော့ စိုးရိမ်မိပါတယ် အမတော်စိတ်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဖုအထစ်တွေရှိတိုင်း ပရဟိတအပေါ်မှာ မငြိုငြင်စေချင်ပါဘူးဗျာ အပေါ်မှာ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ အမတော်ပြောခဲ့သလို လူသားချင်း ခွင့်တူညီမျှဖြစ်စေဖို့ အမတော်ကိုယ်တိုင်ရော ဘာတွေများ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲခင်ဗျ ထမီထဲက လက်သီးစုတ်ကို ဘယ်သူ့မှမြင်မှာ မဟုတ်သလို ခြင်ထောင်ထဲက တောက်ခေါက်သံကိုလဲ ဘယ်သူမှ ကြားမှာမဟုတ်ပါဘူး
ကံကြောင့်မွဲလာတဲ့လူတွေ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံ ခံကြပါစေဟေ့လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ လူတွေ အဲလိုစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိတဲ့သူတွေသာ လောကကြီးမှာ အတူနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ပရဟိတဆိုတာ အမတော်ပြောသလို မရှိသင့်တဲ့အရာပါ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် တစ်နေ့တစ်ဘဝမှာ ကိုယ်တိုင်အဲလို ဒုက္ခပင်လယ်ဝေတဲ့ဘဝမျိုး မရောက်ခဲ့ရင်ပေါ့
ရွာထဲ.. ကော်မန့်ရေးရင်.. အပြန်အလှန်ပြောရင်.. စိတ်တော့မဆိုးရဘူးနော..။
ကွန်ပြူတာကနေရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့.. ဒစ်ဂျစ်စာလေးတွေအပေါ်.. ခံစားချက်ပြင်းပြင်းတွေမထားဖို့.. ဆိုလိုရင်းပါ..။
ဒီရွာကအဲလိုပဲလို့မှတ်..။ ခင်လေလေ.. ပိုပြောလေလေ..။
ဟုတ်ကဲ့ပါ bro kai ဝင်တာမကြာသေးတော့ မသိသေးလို့ပါ နောက်ဆိုဆင်ခြင်ပါ့မယ်ခင်ဗျ
+1ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အနီရောင်တွေက ဘာတွေလဲခင်ဗျာ နားမလည်လို့ပါ
ကြိုက်ရင် + မကြိုက်ရင် – ပါတဲ့..။
.welcome ပါ veryloveman ရေ။ လူသားချင်း ခွင့်တူညီမျှ ဖြစ်ဖို့ မတို့ ဘာမှ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ပရဟိတ တွေလည်း မလုပ်ဖူးဘူး။ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တတွေ တွင်းတူးပြီး မြေမြှုပ်ထားတာ ကြာပေါ့။ ဂဇက်ထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောချင်ရာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါလူ့အခွင့်အရေးပါပဲ။ ကို veryloveman ကိုလည်း ခင်မင်ပါတယ်။ ဖြူစင်တဲ့စိတ်လေးကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ရွာထဲ ၀င်ဝင်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းမိတာ သီးခံပါ ငါ့မောင်ကလေးရေ။
လောလောဆယ်တော့ ပရဟိတ တစ်ဝက်၊ ငွေယူတာတစ်ဖက် နဲ့ Charity တစ်ခု မှာ လုပ်နေပါတယ်။
ဘာ Charity လဲ လို့ ပြောရရင်။
Air Ambulance Charity ပါ။
အရေးပေါ်လူနာ တွေ ကို ရဟတ်ယာဉ် နဲ့ ဆေးရုံ ကို အမြန် သယ်ပေးတာပါ။
အဲဒီ Professional Charity အကြောင်းတွေ မြန်မာပြည် မှာ မျှချင်ပါသေးတယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပရဟိတ အလုပ်တွေ နေရာတိုင်းမှာ လိုပါတယ်။
တကယ်ဘဲ အကျိုးရှိရှိ ထိရောက်ဖို့တော့ လိုသပေါ့။
Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
အားလုံးကို မောင်နှမအရင်းများသဖွယ် ချစ်တတ်ပါတယ် (very love man ပါ ) မှားတာရှိလဲ အားမနာတမ်းပြင်ဆင်ပေးကြပါလို့………
.ဒါ ဂဇက်ရွာပီသတာပဲဗျ…တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အယူအဆမတူပေမဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ် :))
ရွာထဲ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လောက် ငြင်းခုန်သတ်ပုတ် ကလော်တုတ်နေပါစေဦး
များသော အားဖြင့် ဆွေမျိုးတွေ ဆုံသလို နွေးထွေးးးလို့ပါနော့
VLM နဲ့လည်း ကျနော်တို့ ဆုံချင်ပါသေးတယ်လို့
ခင်မင်စွာ. . .
ရက်ပိုင်းသာရှိသေးပေမဲ့ ဆွေမျိုးတွေလို အားလုံးကို ခင်မင်မိပါတယ် ဒီရွာကလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီး ဖေ့စ်ဘုတ်တောင် သိပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး